FIAINANA fohy momba ny FANAJORA VIETNAMESE - Fizarana 2 - Ny Tany Masin'i Vietnam fandalinana
Sekolin'ny zava-kanto ao amin'ny Oniversite George Mason
… Notohizan'ny fizarana 1
Ny ofisialy avy any Latina Abidia Vietnamianina ahitana litera sivy amby roapolo: consonantsanty fito ambin'ny folo ary voady roa ambin'ny folo. afa-tsy f, j, w, ary z, taratasy roa amby roapolo dia avy amin'ny abidia romana. Ny litera fito novaina dia ă, â, đ, ê, ô, ơ, ary ư. Toy ny amin'ny teny anglisy, ny filaharana dia manaraka ny fivorian'ny abidia romana. Taratasy misy marika diakritika no aorian'ny taratasy tsy misy. Ohatra, a mialoha ă ary d mialoha đ. Ity abidia soratory manaraka ity dia ampianarina any am-pianarana.
Ny abidia Vietnamianina izay mifototra amin'ny teny latina
MITADIAVINY AO AMIN'NY DIACRITICS
vietnamiana manana taratasy maro be miaraka amin'ny marika diakritika mba hanavahana ny tonony. Ny filaharan'i ny marika feo miovaova, fa ny fahita indrindra Nguyễn Đình Hòafivoriambe feo tsy misy marika (ngang), maranitra (SAC), am-pasana (Huyền), miakatra eo ambony (Hỏi), tendron-tsoratra (Nga), Ary underdot (Nang). Satria ny diacritics dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanavahana ireo tonony, ny zanadahy tsirairay dia samy afaka manisy marika iray na roa fanampiny. Manaraka 134 litera (valizy sy taratasy kely) maneho ny fahafahan'ny diacritics any Vietnamese.
Marika diakritika Vietnamianina
Araka ny hita amin'ny abidia, ny Rafi-panoratana Vietnamianina fampiasana litera fito novaina. Efatra efatra no nanisy marika diakritika: ă, â, ê, ary ô. Ny telo dia manana fifandraisana marika diakritika: đ, ơ, ary ư. Ity toko ity dia manome tsipiriany fanampiny momba ireo taratasy novaina.
The â dia misy takelaka napetraka eo ambonin'ilay taratasy a. Ny a-circumflex dia afaka manampy additonal maranitra ( á ), am-pasana ( á ), miakatra eo ambony ( á ), tendron-tsoratra ( á ), na underdot ( á ). Ao Vietnamese, takelaka misy endrika chevron no ampiasaina koa e ( ê ) ary o ( ô ).
The đ dia misy lakroa amin'ny alàlan'ny taratasy d. The đ dia marika voalohany. Ny ambony Đ dia manana tsipika marindrano eo afovoany amin'ny sakan'ny haavon'ny taratasy D. Ny kitapo đ dia manana sakana iray afovoany eo anelanelan'ny miakatra sy ny x-haavon'ny taratasy d.
The ê dia misy takelaka napetraka eo ambonin'ilay taratasy e. Ny e-circumflex dia mety hivaingana amin'ny tendon-tenda fanampiny ( é ), fasana ( é ), manantona etsy ambony ( é ), tilde ( é ), na underdot ( é ). Ao Vietnamese, takelaka misy endrika chevron no ampiasaina koa a ( â ) ary o ( ô ).
The ô dia misy takelaka napetraka eo ambonin'ilay taratasy o. Ny o-circumflex dia mety hiatrika akora additonal ( ô ), fasana ( ô ), manantona etsy ambony ( ô ), tilde ( ô ), na underdot ( ô ). Ao Vietnamese, takelaka misy endrika chevron no ampiasaina koa a ( â ) ary e ( ê ).
The ơ dia manana tandroka mipetaka ary mifanaraka amin'ny ilan'ny taratasy o. Ny tandroka o-tandroka dia afaka maka tondro additonal ( ô ), fasana ( ô ), manantona etsy ambony ( ở ), tilde ( ô ), na underdot ( ô ). Any Vietnamese dia ampiasaina koa ny tandroka u ( ư ).
The ư dia manana tandroka mipetaka ary mifanaraka amin'ny ilan'ny taratasy u. Ny tandroka u dia afaka miakatra acre additonal ( U ), fasana ( U ), manantona etsy ambony ( U ), tilde ( U ), na underdot ( U ). Any Vietnamese dia ampiasaina koa ny tandroka o ( ơ ).
Vietnamianina dia fiteny tonal. Ny accent dia ampiasaina hanondroana feo XNUMX miavaka:ambaratonga"(ngang), "Matsilo-tezitra"(sAC), "fasana-fampidinana"(huyEN), "mitovy tantana fiposahan'ny" hOi, "chesty-natsangana"(Nga), ary "chesty-mavesatra"(nAng). Amin'ny fanoratana, ny feo iray dia aseho ho tsy voamarika (a), efatra no asaina miaraka amin'ny diakritika voamarika a voady ( á, à, á, ary ã ), ary misy voamarika miaraka teboka eo ambanin'ilay voady iray ( á ). Ndao hanimba ny fisian'ireo olona ireo isika ny marika feo.
TSY MISY MORA
Feo tsy voamarika (ngang) tsy misy accent. Ny halavany dia manomboka eo antenatenany ka hatramin'ny midy.
An maranitra (dấu sắc) dia accent mandroso miverina amina voady: á, é, í, ó, ú, ary ý. Ny tenda, izay manomboka amin'ny sisiny tery ary mifarana amin'ny tendrony malalaka, dia manondro haingam-pandeha avo lenta. Tokony hiakatra kely mankany ankavanan'ny ny base base ( á ) tsy mianjera. Rehefa mitambatra dia tsy maintsy apetraka mazava avy amin'ny marika hafa ( á, á, é, ô, ô, na U ).
A am-pasana (dấu huyền) dia accent mihemotra miverina amina voady: à, è, ì, ò, ù, ary Y. Ny fasana iray, izay manomboka amin'ny tampony lehibe ary miafara amin'ny ambany tery dia manondro haingam-pandeha ambany. Tokony hiakatra kely mankany ankavia ny toetran'ny fototra ( à ) tsy mianjera. Rehefa mitambatra dia tsy maintsy apetraka mazava avy amin'ny marika hafa ( á, á, é, ô, ô, na U ).
Fitaovana etsy ambony (dấu hỏi) dia marika feon-tsoratra izay mitovitovy amin'ny marika fanontaniana tsy misy dikany napetraka eo amin'ny zanatsoratra á, é, í, ô, U, ary Y. Manondro haingam-pandeha midina ambany izany. Rehefa mitambatra dia tsy maintsy apetraka mazava avy amin'ny marika hafa ( á, á, é, ô, ở, na U ).
A tendron-tsoratra (dấu ngã) dia accent napetraka amin'ny zanatsoratra: ã, é, ĩ, õ, ũ, na Y. Manondro haingam-pandeha avo lenta izany. Rehefa mitambatra dia tsy maintsy apetraka mazava avy amin'ny marika hafa ( á, á, é, ô, ô, na U ).
An underdot (dấu nặng) dia teboka iray napetraka eo ambanin'ny voady: á, é, í, ô, U, ary Y. Manondro haingam-pandeha ambany io ary tsy maintsy apetraka mazava ambanin'ny baseline.
… Tohizo ao amin'ny fizarana 3…
1: Momba ny mpanoratra: Donny Trương dia mpanaingo iray izay tia fatratra amin'ny typografika sy ny tranonkala. Nahazo ny tompon'ny zavakanto izy tamin'ny fakana sary an-tsary avy amin'ny Sekolin'ny Zavakanto tao amin'ny George Mason University. Izy koa no mpanoratra ny Tantaran-tranonkala matihanina.
Words Teny sahisahy sy sary sepia napetrak'i Ban Tu Thu - www.hitoriam.com
◊ FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 1
◊ FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 3
(Visited 4,565 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Anaran'ny Vietnam
Manomboka amin'ny SKETCHES tamin'ny taonjato faha-20 ka hatramin'ny TRADITIONAL RITRA sy FESTIVAL →